Zonke iindaba ze-iOS 11.3 Beta 1 | IPhone iindaba
Emva kokubhengeza ngale ntsasa, iApple ngale mvakwemini isungula i-iOS 11.3 Beta 1, inguqulelo yokuqala eyenzelwe abaphuhlisi bohlaziyo oluya kufikelela kubo bonke abasebenzisi kule ntwasahlobo ngokwenkampani ngokwayo eqinisekisile ukukhutshwa kwayo. Olu hlaziyo luza kuzisa isisombululo kwingxabano yebhetri, Ngeqhosha eliza kukuvumela ukuba usebenze ukuba ukusebenza kwe-iPhone yakho kuyahluka ngokuxhomekeke kwimpilo yebhetri yakho, kodwa ikwazisa nezinye iindaba.
Uhlaziyo luya kufumaneka kwabo basebenzisi ngeakhawunti yonjiniyela, kwaye kulindelwe ukuba kwiintsuku ezimbalwa ezizayo kuya kufikelela nakubasebenzisi abathatha inxaxheba kwinkqubo yoLuntu yeBeta (yasimahla) iApple ebinikela iminyaka embalwa. Sikuxelela lonke utshintsho olwenziwe yile Beta yokuqala ye-iOS 11.3.
1 I-Animoji eNtsha kunye neeNdaba zeShishini
2 Iirekhodi zezeMpilo
3 Ukwenyuka kwamaxabiso
4 Ulawulo lwebhetri
I-Animoji eNtsha kunye neeNdaba zeShishini
I-Apple iyaqhubeka nokubheja kwi-Animoji, kwaye koku ibandakanye abalinganiswa abatsha abaya konyusa ikhathalogu encinci ebesinayo kude kube ngoku. Inamba, ibhere, ukakayi kunye nengonyama zonyusa uluhlu lwabalinganiswa ukuya kuthi ga kwi-16, Esinokuthumela ngayo oopopayi abahlekisayo sisebenzisa usetyenziso lwemiyalezo kwaye kuphela kwi-iPhone X yethu, ngaphandle kokuhambelana nezinye iimodeli zangaphambili. Isicelo seMiyalezo sikwabandakanya enye into entsha, "Ingxoxo ngeShishini", into efana ncam naleya kuWhatsApp isungula kwihlabathi liphela kwaye sinokuthi sixoxe neenkampani ngemiyalezo yokufumana uncedo lobuchwephesha okanye nawuphi na umbuzo.
Iirekhodi zezempilo ziya kuthi zivumele abasebenzisi ukuba babenedatha efanelekileyo kwiimbali zabo zonyango ezigcinwe kwi-iPhone yabo. Ngale nto, kuya kuba yimfuneko ukuba inkampani yakho yezempilo ihambelane nale nkqubo, okwangoku eyenzeka eUnited States, kodwa linyathelo lokuqala kwaye liyimfuneko ukuba sinethemba lokuba kungekudala amanye amazwe kunye neenkonzo zempilo ziya kufuna ukubandakanya ngaphakathi kwezibonelelo zabo, kuba oko kuya kuwuqhuba kakhulu umsebenzi woochwephesha bezempilo xa bekhathalela abaguli ngaphandle kweziko labo eliqhelekileyo okanye nakwamanye amazwe.
Inyaniso engathandabuzekiyo ithatha amanqaku amatsha nge-ARKit 1.5 njengoko inokuthi ngoku isebenze kunye neepowusta kunye nomsebenzi wobugcisa ukukuzisela amava amatsha asebenzisanayo. Kude kube ngoku iKhayaKit lisebenza kuphela ngemigca ethe tyaba, kodwa ngoku liyakwazi ukubona iipowusta, imiqondiso kunye nemisebenzi yobugcisa, ukongeza ekuphuculeni ukwamkelwa kwemigangatho engaqhelekanga efana neetafile zetyhula. Baye basandisa isisombululo kwaye bayenza ukuba ihambelane ne-autofocus.
Enye yezona zinto zilindelwe kakhulu kukulawulwa kwebhetri. IOS 11.3 iya kubandakanya ulwazi malunga nenqanaba lebhetri kwaye iya kukuxelela ukuba kunyanzelekile ukuba uyitshintshe. Iya kusinika ithuba lokulawula indawo yolawulo lwebhetri, yiyo le nto uApple ayibize ngokuba yinkqubo ezenzekelayo enciphisa ukusebenza kweprosesa ukukhathalela ibhetri yakho kwimeko apho ingekho sempilweni. Ngoku iya kuba ngumsebenzisi oya kuthatha isigqibo sokuba usebenze okanye awuwenzi lo msebenzi, oza kufumaneka kwi-iPhone 6 kwaye kamva, kubandakanya i-iPhone SE, ukuya kuthi ga kwi-7 kunye ne-7 Plus.Akunjalo kwiimodeli ezintsha (8, 8 kunye no-X). Lo msebenzi uza kufumaneka ngaphakathi kweZicwangciso> Imenyu yebhetri kodwa ayizukufika de kube lixesha elizayo.
Ngaphandle kolu tshintsho Kukho izinto eziphuculweyo kwiKhayaKit kunye nethuba lokuba abavelisi bongeze ukuhambelana kweKhayaKit kwizixhobo ezikhoyo ngesoftware, utshintsho kwiApple Music kunye neendaba ngobukho obukhulu beevidiyo, kunye nokuhambelana neNdawo ePhambili yeFowuni, engafumanekiyo ngoku eSpain kodwa inaleyo xa ubiza imeko engxamisekileyo. ukusuka kwi-iPhone yakho indawo yakho ithunyelwa ngokuzenzekelayo ukuze iinkonzo zongxamiseko zihambe xa kukho imfuneko
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 11 » Zonke iindaba ezikwi-iOS 11.3 Beta 1
Andiqondi nto, kuba bapapashe i-11.2.5 izolo lanamhlanje ukongeza konke oku…. Ndiyibiza ngokuba yipartridge inesiyezi
Ewe, kulula kakhulu ukuyiqonda ... bazisa zonke izinto ezintsha esele zivavanyiwe kuhlobo olusemthethweni kwaye emva koko baqalisa i-beta ngeendaba ezingaphezulu eziza kuvavanywa kwaye zipolishwe, yeyona inengqiqo kwaye inengqondo ngakumbi xa kukho uphuculo olubalulekileyo ku-11.2.5 kukhuseleko.
Ewe, into yebhetri ibonakala intle kakhulu kum ukuze sikwazi ukusebenza kakuhle.
Eyona nto ibonakala ilungile kum ngumcimbi webhetri, esinokuthi sikhethe phakathi kwebhetri okanye ukusebenza.
I-Apple ikhupha i-12.7.3 ye-iTunes ngenkxaso yePodPod yasekhaya